F-6018T Inqawe Laser ahlabayo Machine - China Dongguan Glorystar Laser
Ukuze Different Umumo tube ahlabayo Umkhiqizo Izici ● okungenisiwe ngokunemba high ball isikulufa ukudluliswa, ngokunemba high komugqa Umhlahlandlela-wesitimela ● okungenisiwe Servo motor uhlelo ushayela, amazwe gearbox Helical. ● Hlukanisa tube ahlabayo kudivayisi ● ijubane elisheshayo ahlabayo, ukusebenza kahle eliphezulu, ephephile, ukusebenza esitebeleni umkhakha Kusebenza Kabanzi asetshenziswa kuzozonke izinhlobo zezimo imikhiqizo metal izimboni ezifana ipayipi ukucutshungulwa metal, Cookware yokugezela lisebenze, ukukhangisa & izimpawu, ukukhanyisa & hardware, cabi kagesi. ..
Ukuze Different Umumo tube ahlabayo
● okungenisiwe ngokunemba high ball isikulufa ukudluliswa, ngokunemba high komugqa Umhlahlandlela-wesitimela
● okungenisiwe Servo uhlelo motor ukushayela, amazwe gearbox Helical.
● Hlukanisa kudivayisi tube ahlabayo
● Fast ijubane ahlabayo, ukusebenza kahle eliphezulu, ephephile, ukusebenza esitebeleni
Kabanzi asetshenziswa kuzozonke izinhlobo zezimo imikhiqizo metal izimboni ezifana ipayipi ukucutshungulwa metal, Cookware yokugezela lisebenze, ukukhangisa & izimpawu, ukukhanyisa & hardware, amakhabethe kagesi, izingxenye auto, imishini kanye nezinto zokusebenza, yasendlini lisebenze, elavator nezingxenye ngokunemba ukucutshungulwa, nokunye .
Ikakhulu isetshenziswa zonke izinhlobo uthayela izinto okungezona contact ahlabayo okusheshayo, oqoshiwe. futhi isibhakela, ezifana steel omnene, insimbi engagqwali, ingxubevange, steel manganese, lashukumisa, aluminium, ithusi nensimbi ipayipi ukucutshungulwa, njll
Jikelele power ukusetshenziswa <20KW
Transmission imodi Ball Intulo Transmission
voltage Ukusebenza 380V 50Hz (60Hz)
Previous: GS-3015G / GS-4020G Fibre Laser Cutting mshini amashubhu ukusika
Olandelayo: Double Station Laser zokushisela Machine
1325 Lazer umsiki
2 Heads Laser umsiki Machine
20w Fibre Laser Ukumaka Machine
20w Mopa Fibre Laser Ukumaka Machine
Izikhangiso Laser Cutting Machine
Arcylic Laser Cutting Machine Inani
isiShayina BLM Pipe Cutting Machine
Indwangu Cutting Machines
CNC Fibre Laser Machine
Fibre Sika Machine
Fibre Laser umsiki Inani
Glass Tube Laser umsiki Machine
Lazer Cutting Machines Acrylic
Pipe Kuhlanganiswe Cutting Machine